တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှ Pulp Pump, Slurry Pump, Pulp Parts တို့ကိုကမ်းလှမ်းထားသည်
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရောနှောခြင်းနှင့်ပျော့ဖတ် Pump
ရောနှောခြင်းနှင့်ပျော့ဖတ် Pump ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ပျော့ဖတ်, slurry Pump ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ပျော့ဖတ်အစိတ်အပိုင်းများ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
လျှပ်စစ်သံမဏိသီအိုရီစက္ကူပျော့ဖတ်စုပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖော့စဖောရက်အက်ဆစ်ပျော့ဖတ် Pump  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပျော့ဖတ်စုပ်စက်စက်မှုဓာတုခံနိုင်ရည် pump  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းပျော့ဖတ် Pump  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နှစ်ခုအဆင့် Flow ပျော့ဖတ် Pump  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူပျော့ဖတ်စုပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူ Pulping ပစ္စည်းပန့်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
non ပိတ်ဆို့ခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်း Centrifugal Pump  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အသေးစားစက္ကူပျော့ဖတ် Chest Agitator  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပျော့ဖတ်အရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုသည့်လှုံ့ဆော်သူ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သောပျော့ဖတ် Chest Agitator  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိ Pulp Chest Agitator  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Pulley Belt Driven Pulst Chest Mixer လှုပ်ရှားမှု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူပျော့ဖတ်ရင်သားကင်ဆာရောစပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ညှိနိုင်သော Impeller ပျော့ဖတ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SS304 ချိန်ညှိ Side Entry ရောနှော Blender  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျှပ်စစ်သံမဏိသီအိုရီစက္ကူပျော့ဖတ်စုပ် ပျော့ဖတ် pump ဖော်ပြချက်: 1.High ထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။ စွမ်းဆောင်ရည်သည်သမားရိုးကျပျော့ဖတ်စုပ်စက်ထက်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃-၁၀% ပိုမိုများပြားသည်။ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်စားသုံးမှုသည် ၁၅ မှ ၃၀%...
ဖော့စဖောရက်အက်ဆစ်ပျော့ဖတ် Pump ဖော့စဖောရက်အက်ဆစ်ပျော့ဖတ် pump : အစားအစာလုပ်ငန်း - ဘီယာတွင် ၀ ိသေသ (သို့) ဝိုင်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်အပိုပစ္စည်းများကိုလွှဲပြောင်းရန်။ အထည်အလိပ် ကြိတ်ခွဲစက် - ဒြပ်ဖိုင်ဘာအရည် viscose အရည်လွှဲပြောင်းရန်...
ပျော့ဖတ်စုပ်စက်စက်မှုဓာတုဒဏ်ခံ Pump-Agitator နှင့် Pulp Pump HUATAO သည်စက္ကူစက်ရုံအတွက် Pulper ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများထောက်ပံ့နေသည်။ Pulp Pump သည်မီးခိုးရောင်သံနှင့်ပြုလုပ်ထားသောပါးလွှာသောမြင့်မားသော ၀...
လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းပျော့ဖတ် Pump HUATAO သည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်မှစ၍ စက္ကူစက်ရုံများရှိခဲ့ပြီး စက္ကူစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများအဖြစ် Slurry Pump / Pulp Pump / Pulp Parts Agitator များကိုလည်းကမ်းလှမ်း ခဲ့သည်။ ပျော့ဖတ် pump: ပျော့ဖတ် /...
နှစ်ခုအဆင့် Flow ပျော့ဖတ် Pump
နှစ်ခုအဆင့် Flow ပျော့ဖတ် Pump HUATAO ထောက်ပံ့ရေး Slurry Pump / Pulp Pump / Pulp Parts Agitator အားလုံးသည်စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများနှင့်ဆိုင်သည်။...
စက္ကူပျော့ဖတ်စုပ် Pulp Pump စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ပျော့ဖတ်၊ သကြားရည်၊ သကာရည်နှင့်အလားတူပျော့ဖတ်ကိုပြောင်းရွေ့လျှင်အသုံးပြုသည်။ ပို့လွှတ်လိုက်သောအလွှာ၏အပူချိန်သည် ၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မက၊ အလယ်အလတ်၏အာရုံစူးစိုက်မှု - ၄% မှ ၆% ။...
စက္ကူ Pulping ပစ္စည်း Pump-Agitator ပြီးတော့ပျော့ဖတ် ပျော့ဖတ်စုပ် အဓိကအားဖြင့်ပျော့ဖတ်စက္ကန့်ပိုင်းအမျိုးမျိုးမှအညစ်အကြေးများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အပိုင်းကိုဖယ်ရှားရာတွင်အသုံးပြုသောအခါစက်ရုံမှသစ်သားပျော့ဖတ်၊...
non ပိတ်ဆို့ခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်း Centrifugal Pump
Non Clogging စက်မှုလုပ်ငန်း Centrifugal Pump-Agitator နှင့် Pulp Pump မဟုတ်သောခုံဖိနပ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ centrifugal Pump, ပြော့ဖ Pump ၏အစကိုရိုက်နေသည်ကရေပေးဝေရေးစက်ရုံအတွက်သုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိလ္လာ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေ, ပင်လယ်ရေ,...
အသေးစားစက္ကူပျော့ဖတ် Chest Agitator
Supply နိုင်ခြင်း: 1200 sets per year
အသေးစားစက္ကူပျော့ဖတ် Chest Agitator Agitator လျှောက်လွှာ ၎င်းကိုစတော့အိတ်တွင်း၊ ပျော့ဖတ်မျှော်စင်၊ ရေကူးကန်ရောနှောခြင်း၊ ရေကူးကန်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ပျော့ဖတ်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရှေ့စတော့ရှယ်ယာအိတ်များတွင်အသုံးပြုသည်။ JAM...
ပျော့ဖတ်အရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုသည့်လှုံ့ဆော်သူ Automatic Pulp Chest Agitator သည်ပျော့ဖတ်ကိုတည်ငြိမ်စေရန်အတွက် Pulp ရင်ဘတ်အားစက္ကူနှင့်ပျော့ဖတ်စက်များတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ရင်ဘတ်မှစက္ကူပျော့ဖတ်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်သည်။...
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သောပျော့ဖတ် Chest Agitator
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သောပျော့ဖတ် Chest Agitator -Pulper ပစ္စည်းကိရိယာများ ငါတို့အားကမ်းလှမ်းသော Agitator သည်ပျော့ဖတ်သိုလှောင်သည့်သေတ္တာများတွင်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆမျှော်စင်များ၊ ရင်ဘတ်နှင့်စက်ရင်ဘတ်စသည်တို့တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။...
သံမဏိ Pulp Chest Agitator
သံမဏိ Pulp Chest Agitator Agitator ၏ဖွဲ့စည်းပုံသွင်ပြင်လက္ခဏာများ: Agitator သည် cantilever အနားကွပ်ချိတ်ဆက်မှုပုံစံဖြစ်ပြီးသီးခြားအုတ်မြစ်မရှိဘဲပျော့ဖတ်ရင်ဘတ်နံရံတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ 2. ၎င်းကိုတြိဂံခါးပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သည်၊...
Pulley Belt Driven Pulst Chest Mixer လှုပ်ရှားမှု Agitator ၏ဖော်ပြချက်: အေးဂျင့်သည်စက္ကူစက်ပစ္စည်းများရှိကုန်ကြမ်းသိုလှောင်ခန်းသယ်ဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ Agitator...
စက္ကူပျော့ဖတ်ရင်စေ့ရောစပ်ခြင်း - Pulper ပစ္စည်းကိရိယာများ ထို့အပြင်ပျော့ဖတ်ရောနှောခြင်းဟုခေါ်သည့် Agitator သည်ပျော့ဖတ်ရောနှောခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်ခြင်းအတွက်ပျော့ဖတ်နှင့်စက္ကူလုပ်ငန်းများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Agitator သည် 15-1 mm...
ညှိနိုင်သော Impeller ပျော့ဖတ်
ညှိနိုင်သော Impeller ပျော့ဖတ် စက္ကူပျော့ဖတ်ရောစပ်ခြင်းအတွက်လှုံ့ဆော်သည်: 1.Its အသံအတိုးအကျယ်သေးငယ်သည် 2.The ရောစပ်အချိန်တိုတောင်းသည် 3.the လှုံ့ဆော်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းလှ၏ စကရင်ကိုပျော့ဖတ်ရေကန်တွင်သိသိသာသာနှိုးဆွရန်အသုံးပြုသည်။...
SS304 ချိန်ညှိ Side Entry ရောနှော Blender
SS304 ချိန်ညှိ Side Entry Mixer Blender / Agitator Agitator ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: ပစ္စည်းများ: အလတ်စားနှင့်ချိတ်ဆက်အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုသံမဏိဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည်။ Blades: Agitator ဓါးသွားများသည်မတူညီသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အလွယ်တကူချိန်ညှိနိုင်သည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ ရောနှောခြင်းနှင့်ပျော့ဖတ် Pump ပေးသွင်း
အမျိုးမျိုးသော Agitator နှင့် Pulp Pump အမျိုးအစားများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းအထူးပြု HUATAO GROUP၊ Pulp Pump, Slurry Pump, Pulp Parts, Agitator နှင့် Pulp Pump များပါ ၀ င်သည်။
ပျော့ဖတ် slurry Pump ပျော့ဖတ်အစိတ်အပိုင်းများ လှိုင် ကော်စက်